Mmepụta - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Na-adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ Production
Ọtụtụ ọganihu nke teknụzụ mechara bụrụ ihe ga - ekwe omume mgbe e mepụtara igwe magnet na - adịgide adịgide n'ụdị dị iche iche. Taa, ihe ndị nwere magnetik nwere ihe magnetik na igwe dị iche iche, a pụkwara iji ezinụlọ anọ nke magnet na-adịgide adịgide mee ihe n'ọtụtụ ngwa.
RUMOTEK Igwe Ọdụdọ nwere nnukwu ngwaahịa nke magnet na-adịgide adịgide n'ọtụtụ ụdị na nha nke dịgasị iche na ngwa onye ahịa, ma na-enyekwa ihe ndọta akwa. Ekele anyị nwere na ihe ndị magnetik na magnet na-adịgide adịgide, anyị mepụtara ọtụtụ usoro magnetik maka ngwa ụlọ ọrụ.
Gịnị bụ nkọwa nke magnet?
Igwe Ọdụdọ bụ ihe nwere ike ime ihe ndọta. All ndọta ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu North Pole, na otu South Pole.
Gịnị bụ ala magnet?
Ihe ndọta bụ mpaghara oghere ebe enwere ike magnet. Igwe magnet nwere ikike na ntuziaka.
Gịnị bụ ndọta?
Magnetism na-ezo aka n'ike nke ihe na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ na-asọ oyi nke dị n'etiti ihe ndị e ji ihe ndị akọwapụtara dịka iron, nickel, cobalt and steel. Ike a dị n'ihi ngagharị nke ebubo eletriki n'ime usoro atọmịk nke ihe ndị a.
Gịnị bụ ihe ndọta "na-adịgide adịgide"? Kedu ihe nke a si dị iche na "elecromagnet"?
Ihe ndọta na-adịgide adịgide na-aga n'ihu na-ewepụta ike ndọta ọbụlagodi na enweghị isi iyi, ebe electromagnet chọrọ ike iji mepụta ndọta.
Kedu ihe dị iche magnet isotropic na anisotropic?
An isotropic magnet adịghị agbaso n'oge usoro nrụpụta, yabụ enwere ike ịtọ ndọta n'akụkụ ọ bụla mgbe emechara ya. N'ụzọ dị iche, anisotropic magnet na-ekpughere na magnetik siri ike n'oge usoro nrụpụta iji mee ka ihe ndị ahụ dị na ntụziaka a kapịrị ọnụ. N'ihi ya, enwere ike ịme magnet anisotropic naanị n'otu ụzọ; ma ha n'ozuzu nwere ike magnetik.
Kedu ihe na-akọwapụta ndọta?
Ọ bụrụ na a hapụ ya ka ọ na-agagharị n'enweghị nsogbu, magnet ga-ejikọta onwe ya na ụwa. A na-akpọ okporo osisi na-achọ n'ebe ndịda "osisi ndịda" na osisi nke na-ezo aka n'ebe ugwu, a na-akpọ ya "north pole."
Olee otú e si atụ ike ndọta?
A na-atụ ike magnet na ụzọ ole na ole. Lee ihe atụ ole na ole:
1) A na-eji Meter Gauss tụọ ike nke ubi magnet na-ebupụta na nkeji akpọrọ "gauss."
2) Pull Testers nwere ike iji tụọ ego nke ịdị arọ magnet nwere ike iburu na kilogram ma ọ bụ kilogram.
3) Permeameters na-eji amata ihe njirimara magnetik nke otu ihe.